people Nepal » आज भाद्र २२ गते / सेप्टेम्बर ७ तारिख बिहीबार को राशिफल आज भाद्र २२ गते / सेप्टेम्बर ७ तारिख बिहीबार को राशिफल – people Nepal
आज भाद्र २२ गते / सेप्टेम्बर ७ तारिख बिहीबार को राशिफल
अाज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल भाद्र २२ गते बिहीबार इश्वी सन २०१७ सेप्टेम्बर ७ तारीख आश्विन कृष्ण प्रतिप्रदा तिथी ११:४८ बजे सम्म पश्चात द्वितिया तिथी चन्दमा कुम्भ राशिमा प्रातः ०७:५९ बजे सम्म पश्चात मिन राशिमा सूर्य दक्षीणायन बर्षा ऋतु, द्वितीया श्राद्ध पुञ्चलीभुजा, निजामती सेवादिवस
अनावश्यक क्षेत्रमा गरीएको लगानिका कारण सामान्य मानसिक समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । पारीवारिक साथ सहयोगका साथमा अघि बढेमा ब्यापार व्यवसायमा उत्तम समय रहनेछ । आत्मिय ब्यक्तिहरुका कारण आय आम्दानिका क्षेत्रमा मध्यान पश्चात झन्झट देखा पर्नेछ ।
कला कौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्नाले मन प्रशन्न साथै आम्दानि बृद्यि हुनेछ । नयाँ तथा साजेदारी कार्यको थालनिका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । परोपकारी भावनामा बृद्यि हुनाले हर श्रेत्रमा प्रसम्शीत भईने योग रहेको छ । भोज भतेर जन्य कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
सभा सम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको योग साथै मान सम्मान प्राप्तीको अवसर जुट्नेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा नयाँ कार्यको थालनि उत्तम रहनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती अधिक समय प्रयोग लाभदायक साबित हुनेछ । सवारी साधनको प्रयोमा भने सजग रहनु होला ।
पुराना मित्र हरुसगँको भेट घाटको अवसर जुट्नेछ । सामान्य यात्रा पश्चात बिशेष जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने परीस्थीत सृजना हुनेछ । सामान्य कार्यसम्पादनमा भएको त्रुटिका कारण अपजसको भागीदार हुने सम्भाबना रहेकोछ । पारीवारिक श्रोत साधनको खरीदमा सामान्य खर्चको योग रहनेछ ।
मानसिक चन्चलताका कारण सम्पादनउन्मुख कार्यमा ढिलाईको सामना हुन सक्नेछ । वाणीमा देखिएको तिक्तताका कारण सामान्य बादबिवादको चपेटामा फसिएला । खानपानको गढबडिले गर्दा स्बास्थका श्रेत्रमा सामान्य झन्झट देखा पर्नेछ । मित्रहरुको सहयोग द्वारा आम्दानि बृद्यि हुनेछ ।
ब्यापार ब्यवसायमा भने सामान्य ढिलाईको सम्भाबना रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोगमा कमि आएको महसुस हुनेछ । जिबन साथिको सहयोगमा गरीएका कार्य बाट मनग्य लाभ प्राप्त हुने समय रहेको छ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नुपर्ला । शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ ।
मान प्रतिष्ठामा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रतिस्पर्दिहरुको बृद्धि हुनाले कार्य सम्पादनमा बिषेश ध्यान पूर्याउनु पर्ने समय रहेको छ । साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नबढेको नै राम्रो हुनेछ । शारीरिक अस्वस्थाको सम्भाबना रहेको छ । आकस्मीक खर्चको सामना गर्नु पर्नेछ ।
आय आर्जनका लागी नयाँ आम्दानिका श्रोत हरु फेला पर्नेछन । साजेदारी ब्यवसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ । गैर ब्यक्तिको पुर्ण बिस्वास नर्गनु राम्रो हुनेछ । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहने छ । अरुको कार्य लापरबाहि को प्रतिफल तपाईलाई आईपर्न सक्नेछ ।
भौतिक श्रोत र साधको प्रयोमा समय ब्यतित रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोमा गरीएका कार्यहरु दीर्घकालिन फाईदाका श्रोत साबित हुनेछन । पति पत्नि बिचको सम्बन्धमा सामान्य खटपट रहने सम्भाबना रहेको छ । कार्यक्षेत्रको लगन सिलतामा बृद्धि हुनाले मान सम्मानको योग रहेको छ ।
शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक परीश्र गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । अधिकआत्मबिश्वासका कारण सामान्य बादबीबादको सामना गर्नु पर्नेछ । मित्रजन तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । धृष्टता पुर्ण बाणीका कारण निकटतम ब्यक्तिहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोगमा कमि आएको महसुस हुनेछ । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहने छ ।
अध्यन अध्यापनमा रुचि जाग्नेछ । रोकिएर रहेका कार्य सुचारु गर्न राम्रो समय रहेको छ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायको साजेदारीमा भने समान्य असमन्जसता उत्पन हुन सक्नेछ । कार्य धैर्यताका कारण पद प्रतिष्ठामा बृद्धिको योग रहेको छ ।